"Ok Google": Sei SEO izwi rekutsvaga kuchinja? - TELES RELAY
HOME » TECH & TELECOM "Ok Google": SEO izwi search search inoshanduka sei?
TELES RELAY 22 May 2019
Nzira yekuvhiringidza zvinyorwa zvakasarudzwa
Zvakakoshawo kuziva kuti unogona kuwana tsvina uye unorasikirwa zvakare. Icho chinoreva kuti zvinyorwa zvakanga zvakakwanira kuti Google iongorore, asi kwete zvakanaka zvakakwana kuchengetedza.
Muchiitiko ichi, zvinyorwa zvinoda kugadziriswa zvakare uye zvakagadziridzwa. Nokufamba kwenguva, Google ichacherechedza kuchinja uye inogona kusarudza kuedza zvakare uye, pane zvakanakisisa, kuti ivaparidze zvachose muhurukuro inopiwa.
Iterative tsanangudzo yezvinyorwa zvakasarudzwa (Image: eology)  Kutsvaga kwezwi uye data yakarongeka
Kunyora kwezvakanyorwa maererano ne schema.org inozivikanwa kune vose vanotsanangura. Pane mathesi anogona kushandiswa kugadzira zvinyorwa zvewebsite mune imwe yunifomu kuitira kuti inogona kugadziriswa nokukurumidza nekutsvaga injini. Iye zvino, inzwi-pamusoro pekuwedzera rakange rawedzerwa kuti rigadzire zvakagadzirirwa mutauro vabatsiri. Pano, zvinobvira kugovera zvinyorwa zvakanyatsoenderana ne "izwi synthesis".
Kugadzirisa "kutaura zvinhu" kunoda basa rakawanda. Dhiyabhorosi inofanira kuiswa pachena uye zvinyorwa zvigadziriswa kana zvakakodzera.
Schema.org markup kugovera zvinyorwa zvakataurwa nekutaura kwezwi; Kunobva: schema.org/SpeakableSpecification
Chii chinotaurwa nezvakagadzirwa?
Apo vashandisi vanoshandisa izwi kutsvaga, vanobvunza mibvunzo chaiyo uye vanotarisira mhinduro dzakakodzera uye dzinodzidzisa. Pano, rudivi uye rudivo ruzivo runodikanwa. Saka, zvinotevera zvinokodzera sezvinotsanangurwa:
FAQ - Mibvunzo Inowanzobvunzwa
Contact / open hours
Yambiro: Ikozvino, yakagadzirirwa deta yekutsvaga kwezwi ichiri kuratirwa se "iri kumirira" uye ichigere kusunungurwa zviri pamutemo. Kunyange zvakadaro, kugadziridza zvinyorwa zvekutsvaga kwezwi zvakatove zvakakosha, somuenzaniso kuonekwa mumagetsi ekunyorwa.
Kutsvaga Kwezwi neGoogle Bhizinesi Yangu
Kukumbira kwezwi kunowanzobatana-nzvimbo, zvakadai se "pedyo neni" uye ndevako. Vashandi vanowanzokumbira ruzivo rwebhizinesi rekuno Nharaunda yekutarisa uye kugoverwa kwakakwana kwemashoko akavakirwa vari kukwezva zvakanyanya. Panyaya iyi, zvinonzwisisika kusimbisa webhusaiti yayo pahutano hwemuganhu.
Zvinokurudzirwa kushandura kusunungurwa kwemashamba emakambani Google Bhizinesi Yangu . Izvi zvinosanganisira, semuenzaniso, kutarisa kana Google yakanyatsocherechedza nzvimbo yechitoro paGoogle Maps, nhamba yefoni yemunharaunda uye mifananidzo, pamwe nekugona kwekuongorora.
Uyewo inonakidza: Skill License
Mhedziso: "Ok Google, ndingagadzirira sei kutsvaga mazwi?"
Ita SEO Gadzirirai izwi kutsvaga nekugadzirisa webhusaiti yako nokuda kwezvinyorwa zvemashoko, kuisa mutengo wakakodzera wezvakagadzirirwa deta, uye kuchengetedza neGoogle Bhizinesi Yangu Bhizinesi kukoshesa kutsvakurudza kwezwi.
Chinhu chinokosha ndechekuti iwe unofunga nezvazvo: chii chinoshandiswa nevashandi? Uri kukumbirei? Zvadaro iwe unofanira kupa mhinduro dzakakodzera kumibvunzo iyi pane webhusaiti - somuenzaniso, mu FAQ kana ine tsanangudzo.
Pamusoro peMunyori: Ramona Sahlmüller is SEO Consultant pa eology GmbH muVolkach. Anopa mazano kumakambani mumasimba akasiyana-siyana mumunda wekutengeserana kwemaInternet uye anokurukura mafambiro ekutsvakurudza injini.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pezwi rekutsvaga nekutsvaga injini yekugadzirisa, ona mapepa machena " Tsvaga Engine Optimization yeMamwe Web Traffic ".
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lead-digital.de/ok-google-wie-veraendert-voice-search-seo/
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://teles-relay.com/2019/05/22/ok-google-comment-la-recherche-vocale-seo-change/
Cameroon: CNPS inotora Orange Money kuitira kubhadharwa kwekuchengetedzwa kwemagariro evanhu pamwe nemari yemhuri
VaMaralkan vakakokwa kuti vabvise mukuru wemapurisa wenyika, MSN inonzi inhengo yeFPI
Rega kushandisa yakaora PIN codes! (uye apa ndiyo nzira yekuzviita)
Colorectal cancer screening kits
Venezuela vs. Peru - Mutsara webhokisi yemushumo - 15 June 2019 - ESPN
(VIDEO) Verenga Vega & # 39; warms & # 39; Instagram doing wild twerk in leggings - VIDEO
Mvangan: vashandi vemunharaunda kuchikoro chitsva chemashandisi emakombiyuta
Congo - Brazzaville - Opportunities Job18
VANHU & VANHU5,282
KUCHOKURUKURWA KWENYANZERO YE AFRICA132